Ucwaningo - HHO FACTORY, Ltd
IStanley Meyer Hydrogen Amanzi Amanzi AMA-HHO injektha ye-HHO Kit HHO Amavidiyo wegesi
Incazelo yeseli likaphethiloli lihlukanisa amanzi abe izakhi zawo, i-hydrogen ne-oxygen. Igesi le-hydrogen labe selishiswa ukuze likhiqize amandla, inqubo eyakha kabusha ama-molecule wamanzi. Ngokusho kukaMeyer, le divayisi idinga amandla amancane okwenza i-electrolysis kunesidingo samandla amancane ...
Izimoto zedizili kumele zikhishwe ukuze kunqandwe ukufa kwabantu abangcolile, kusho isikhulu sezempilo
Izimoto zohlobo lwe-Iesel kufanele ziqedwe ukusika amashumi ezinkulungwane zabantu ababulawa minyaka yonke ngenxa yokungcola komoya, kusho isikhulu sezokwelapha kuhulumeni. UDame Sally Davies, uthe ushayela imoto enenjini kaphethiloli ...
Ukungcoliswa komoya ukukhathazeka kwempilo yomphakathi wesizukulwane sethu
Ukungcoliswa komoya ukukhathazeka kwezempilo yomphakathi weKhansela lethu lesizukulwane sethu uGeorgina Milne uchaze ukungcoliswa komoya njengokukhathazeka okukhulu kwezempilo yomphakathi esizukulwaneni sethu. Ukuphawula okuvela kwiKhansela lase-Ormiston kuza ngesikhathi kushicilelwa umbiko omusha oxhumanisa ...
Mashi 19, 2020
I-NASA Research EMISSIONS KANYE NOKUSETSHENZISWA KWAMANDLA OKUPHELELE KOKUSETSHENZISWA KWE-PISTON ENGINE ESEBENZA NGEGAYOLINI NANGOKUXHUMANISA I-HYDROGEN GASOLINE MIXTURE
Ochwepheshe bethukile: I-HHO Kit X-Cell entsha iyanda kwi-Intanethi
YEHLISA OKUPHUMA KWE-CO, NOx KUfike Ku-90% VIKELA IMPILO YEZINGANE - VIKELA INDAWO - VIKELA IKUSASA! Kusukela ngo-1998, kube nenkinga cishe ngengxenye eyodwa kwezintathu ye-CO kuzo zonke izinhlobo zezinjini. I-HONDA CR-V 2.0 Litre TEST 1/3...
Mashi 10, 2020
IToyota ineloli le-hydrogen, lidlula i-480 km ngokugcwaliswa
Uthathe isinyathelo esilandelayo maqondana nekusasa lamaloli angakhiphi umoya. Okusha okwethulwe eCar Centre enyakatho neMichigan, negama langaphakathi elithi "Beta", kwandisa amandla eloli lokuqala leProject Portal ngokwelula ...
Ukulimala kwesidoda, ukungabinakho ukuzala okuxhumene nokungcoliswa komoya - ucwaningo
Abesilisa abaphupha ngokuba ngubaba bangafuna ukuqinisekisa ukuthi bahlala endaweni enekhwalithi yomoya enhle. Ucwaningo olusha luthole ukuxhumana phakathi kokungcoliswa komoya nesidoda esingajwayelekile, okungaholela ekungazali. Ucwaningo, ...
Kungekudala sizokwazi ukuguqula imfucuza yepulasitiki ibe ngophethiloli we-hydrogen
Ipulasitiki elahliwe ingasetshenziselwa ukubasa izimoto esikhathini esizayo ngenxa yenqubo yokwephula umhlaba eyenziwe ngososayensi baseSwansea University. Bakwazile ukuguqula ipulasitiki engadingeki yaba yi-hydrogen nayo engasetshenziselwa ukwenza ...
Imoto yamatekisi yokuqala yaseHolland H2 ishaya umgwaqo
INoot Personenvervoer ingesinye sezithuthi ezinkulu kakhulu zabagibeli eNetherlands esinamatekisi ayi-1,200 2, amabhasi amancane kanye nabaqeqeshi. Idolobha lase The Hague likwenze kwaba yinto edingekayo ukuthi le mikhumbi isebenze i-COXNUMX-hlangothi phakathi ...